शिक्षकलाई नछोएको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक दिवस : कसले के भने ? | नुवागी
शिक्षकलाई नछोएको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक दिवस : कसले के भने ?
शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न भएको छ । सो सन्दर्भमा नेपालमा पनि विभिन्न तह र तप्काबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु भएका छन् ।
औपचारिकतामा सीमित बनेको भन्ने आरोपबाट मुक्त नभएको यो दिवसले नेपाली शिक्षकहरुलाई कत्तिको छोयो ? अनि नेपालका शिक्षकहरुको स्थान कहाँ र नेपालका शिक्षकहरुले के र कस्ता समस्या झेलिरहेका छन् ? यही विषयमा दिवसकेन्द्रीत केही शिक्षकहरुका विचार ।
लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, (महासचिव) नेपाल शिक्षक महासंघ
शिक्षक दिवस हाम्रो दिवस हो, यो राज्यसँग जोडिदैन र हामीले हाम्रो दिवसमा शिक्षकको हक, सचेतनाको लागि हाम्रा मुद्धाहरु सामाजिक सरोकारका बिच पु¥याएर त्यसलाई स्थापित गर्न शिक्षक दिवस मनाएका हौं ।
अहिलेको सन्दर्भमा बालविकासका शिक्षकको न्यून तलब, राहत शिक्षकको पेशाको स्थायित्वमा सुनिश्चतता नभएको, स्थायी शिक्षकको ग्रेडमा विभेद, समयमा पदोन्नति नहुनु जस्ता समस्यामा छन् शिक्षक । अहिले शिक्षामा भएको लगानी एक अंकमा छ ।
राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी, शिक्षकमैत्री निति बनाएर सबै शिक्षा नितिमा शिक्षक महासंघलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शिक्षकको जुन सम्मान छ, त्यसमध्ये सबैभन्दा तल नेपाल रहेको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा नेपाली शिक्षकको आर्थिक अवस्था कमजोर र उनीहरु पिडित र पछाडि छन्।
राजन श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल, पायोनियर पब्लिक स्कुल
शिक्षक पेशेवर हुन सकेक छैनन् । शिक्षक पेशालाई विदेशमा जस्तो सम्मान छैन । पहिला शिक्षकलाई गुरु भन्दै दिइएको सम्मान अहिलेको समाजमा हराएको छ । केही शिक्षकहरु कै कारण शिक्षण पेशामा समस्या आएको छ । शिक्षक बन्ने लक्ष्य लिएर नै शिक्षक पेशामा नलाग्ने र अन्त काम नपाएपछि शिक्षक बनेर लाग्ने शिक्षकको कारण शिक्षक पेशाप्रतिको मर्यादामा कमी आएको छ । आर्थिक रुपमा सबल हुन गाह्रो छ । शिक्षकको समस्या सुधार्न शिक्षक नै लाग्नुपर्छ । शिक्षण पेशालाई समय कटाउने बाटोको रुपमा लिन हुन्न । सरकारले पनि शिक्षकलाई क्षमता अनुसारको सेवासुविधा साथै तालिम दिनुपर्छ । शिक्षक दिवस एक दिन मनाएर केही हुन्न, तर शिक्षकहरु एकत्रित भएर आफ्ना सुरक्षा र हकहितका बारेमा र हाम्रो अस्तित्व रहेको देखाउनु पर्छ । सरकारी र निजी दुवै विद्यालयमा शिक्षकको योगदान देखाउन पनि शिक्षक दिवस मनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालका सबै शिक्षक कमजोर छ । आफ्नो पढाइ सकेर धैर्यता र मेहेनत दिएर शिक्षण पेशामा लागेका शिक्षक राम्रो शिक्षक हुने र नेपालमा हाल विश्वव्यापी रुपमा ब्रिटिस काउन्सिल, अमेरिकन एम्बेसीलगायत एनजिओ–आइएनजीओ, विश्वविद्यालयबाट शिक्षक पुरस्कारबाट शिक्षक सम्मान गरिरहेकोछ । भनिन्छ नि औसत शिक्षक, शिक्षक हुन् तर वास्तविक शिक्षक त्यो हो जो प्रेरणादायी हुन्छ, त्यसैले औसत शिक्षक नभएर प्रेरणादायी शिक्षक बनेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पहिचान बनाउन र शिक्षण पेशाको गरिमा बढाउन सकिन्छ ।
हरिप्रसाद ढकाल, प्रधानाध्यापक, जोरपाटी स्कुल
विभिन्न वर्गमा शिक्षकलाई विभाजन गरिनु नै शिक्षकहरुको मुख्य समस्या हो । अस्थायी, स्थायी, राहत भनेर विभाजन गरी शिक्षकमा एक रुपता नहुनु शिक्षकको समस्या हो, शिक्षकको व्यवस्थापन, कामको आधारमा सम्मान, नेपाल सरकारले शिक्षकको मर्यादा नदेख्नु जस्ता समस्याहरु छन् शिक्षकका । राज्यको संयन्त्रबाट सुधार गर्नुपर्ने, सेवासुविधामा शिक्षकलाई पुरस्कार राख्नुपर्ने, राजनीतिक दलीय हिसाबमा शिक्षकलाई लानु नहुने र पेशागत रुपमा लानुपर्छ । नीति–नियम बनाउन पर्ने ठाउँमा शिक्षकको कहिँ पहुँच नभएकाले शिक्षकले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सकेका छैनन् ।शिक्षकको प्रतिनिधि गर्ने ठाउँमा महासंघ भएपनि त्यसमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारका कुरा जोडिएको छ । यस्ता समस्याका समाधानका लागि केही उपाय निकाल्नेको अपेक्षामा शिक्षक दिवस आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली शिक्षकको स्तर तल्लो छ ।
कृष्णलाल न्हेम्हाफुकी, प्रधानाध्यापक, ज्योती मा.वि
एउटै पदमा बसेर काम गनुपर्ने अवस्था छ, सेवासुविधाको कुनै ग्यारेन्टी छैन । प्राविमा बस्ने प्रावि मै बसिरहनु पर्ने र प्राविमा नै जागिर छोड्नुपर्ने, निमावि र माविमा शिक्षक भएकाको पनि त्यस्तै हालत छ । शिक्षकहरुको समस्या समाधान नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले त नगरपालिकाले यसको समाधान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर नगरपालिकाले उस्काइदिने मात्र गरेको छ । नगरपालिकाले राम्रो गुणस्तर शिक्षा भनिरहेको छ तर त्यसका लागि शिक्षक दिने र भएका शिक्षकलाई सेवा दिने काम गर्न सकेको छैन । उनीहरु केबल कार्यक्रम राख्छन्, भाषणमात्र गर्छन् ।
प्रस्तुति: सबिना बानियाँ
अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारमा सहभागिताबारे अभिमुखीकरण
काभ्रेका विभिन्न पालिकामा प्याब्सनको समिति गठन